Isilimela 6, 2018 admin
Indian Bust Amapolisa Kuku ye Crypto-based utya- Scheme
I utya- yayibandakanya iinkqubo eziliqela yi dr. Amit Lakhanpal, CEO ye-Money Trade Coin Group kunye Cmd of the Flintstone Group. Amagosa wathi Lakhanpal ukuba udale cryptocurrency ebizwa ngokuba Money Trade Coin (MTC), leyo kakhulu mazithengiswe ukwenzela ukuba Indian noluntu ngokubanzi ukwenzela ukuba sokurhwebesha abatyali kwezinye nezahlulo ngumyinge. I-ofisi e Orion Business Park yimpahla le Flintstone Group arhente yophuhliso real estate kuthiwa “kwiziko lobuqhophololo” kunye nabasebenzi bayo orchestrating uninzi kula maqhinga yobuqhophololo; Abatyali mali ifunwa “izihlandlo ezilishumi ukuya kumashumi amabini kwiinyanga nje ezine ukuya kwezintandathu,” Times Of India. Bekukwakho athi abanye abatyali aze wathembisa ubumi Caribbean, indawo zasebhange Swiss akhawunti e ngenxa yabo abayityale kweli shishini.
Kuqikelelwa ukuba isixa-mali esiqikelelwayo imali efunyenwe yi le nkqubo utya- ngokubanzi malunga 500 kaZerore, leyo kulingana $ 6,699,450,000.
Phakathi umhlola, amapolisa Thane wabanjwa bambopha taha Kazi, elinye iqhosha ukwakha amagcisa, kodwa nangoku ufuna Lakhanpal kunye namanye amanani ezine eziphambili rhwaphilizo.
I utya- wancinwa ngabasemagunyeni beenqila balandelayo isikhalazo ukusuka Delhi xa Managing Director uPravin Agarwal emva kokufumana akukho Ukubhatalwa evela kwinkampani. USekela eliyiNtloko wamaPolisa Abhishek Trimukhe uthe:
“Siye wabhala ulwaphulo-mthetho kwisikhululo samapolisa Chitalsar, apho abamangalelwa ezazithengiswa ingqekembe cryptocurrency, tlhela abantu abambalwa.”
Ukusukela ngoko, ngoku amapolisa bephume ngokusemthethweni a “icala lokukhohlisa, ephule mthetho, forgeries kunye neminye imimandla echaphazelekayo-IPC, ukongeza uMthetho Maharashtra yokuKhuselwa nabatyalimali abanomdla, 1999, kananjalo phantsi Information Technology Act”.
Nangona kusekho ayaziwa le nkqubo utya- kude kangakanani ngayo indawo, ingxelo yamapolisa ukuba kuhlasela yesibini iya kuqhubeka kwenye iofisi kailas Industrial Park, Vikhroli.
Emva kwale ungonakala, abaninzi bakholelwa ukuba Koluny uyinxalenye utya- elikhulu ukusebenza ngaphandle Dubai. Kuye kutshanje ingxelo ukuba Lakhanpal sele asebenzisana iKhabhinethi soBekekileyo Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum ukuba zenze “Al Teller Group,” a Dubai-based Diamond-exhaswa kuqaliso entsha crypto. Ijolise ukudala asethi blockchain ezifakwe kunye ubuncwane kwaye wasebenza esebenzisa ku-endlwini exchange. Yinto ezingentle Al Kasir Group sele liqalise yayo “Pre Initial Blockchain Asset Umnikelo” ngokusebenzisa Portal Al Kasir Group, leyo kukutsala utyalo. Enoba amabango ukuba oku enyanisweni unina utya- ukuya okule mncinane, uhlala ukuze kubonwe.
Ingxelo Daily Market Kraken for 05.06.2018
$158M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje